fumana iapile yasimahla ye-iphone 11 kwi-t-mobile, nantsi indlela
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Fumana i-Apple 11 yasimahla yeT-Mobile, nantsi indlela
Fumana i-Apple 11 yasimahla yeT-Mobile, nantsi indlela
I-T-Mobile ibonelela nge-64GB yasimahla ye-Apple iPhone 11 kuye nakubani na ohlangabezana neemfuno zayo. Khange ucinge ukuba kulula ukufumana i-iPhone yasimahla, andibi? Ewe, akunzima nokuba nje unayo enye ifowuni onqwenela ukuyithengisa nge-iPhone 11.
Ibali elifutshane elifutshane, unokufumana i-iPhone 11 64GB yasimahla ukuba uzisa inombolo yakho kwi-T-Mobile evela kumphathi ofanelekileyo kwaye wenze isicwangciso selizwi esifanelekileyo. Emva koko, kuya kufuneka uthenge i-iPhone 11 64GB kwisicwangciso sokuhlawula senyanga.
Okokugqibela, kuya kufuneka urhwebe kwezi zixhobo zilandelayo zikwimeko elungileyo: I-iPhone XS Max, i-iPhone XS, i-iPhone XR, i-iPhone X, i-iPhone 8, i-iPhone 8 kunye ne-Samsung Galaxy S10, i-Samsung Galaxy Qaphela 9, i-Google Pixel 4 XL okanye iGoogle Pixel 4.
Ukuba awunazo naziphi na iifowuni ezidweliswe apha ngentla awuyi kukwazi ukufumana i-iPhone 11 yasimahla, kodwa usenganyuka uye kuthi xhaxhe kwi-500 yeedola ukuba uthengisa kwesinye sezixhobo ezifanelekileyo: i-iPhone 7, i-iPhone 7 kunye , iPhone 6s, iPhone 6s Plus, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy Note 8, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3, LG G8 okanye OnePlus 7 Pro.
Nje ukuba uhlangane nazo zonke iikhrayitheriya, uya kufumana ikhredithi yokurhweba ngetyala elingu-24 ngenyanga. Isivumelwano sijolise kubathengi abakulungeleyo kwaye azibandakanyi irhafu.
Inqaku lesi-7 lingena manzi
super mario run beta beta
Ukunyusa amaxabiso eselfowuni kwi-Apple iPhone 5 kunye ne-Apple iPhone 5c
Uhlelo lokusebenza lweGoPro lubizwa ngokuba yiQuik enezinto ezinamandla zokuhlela izixhobo ze-iOS kunye nabasebenzisi be-Android
Isamsung i-Samsung Galaxy Qaphela i-9 yamatyala asemthethweni ukujonga: S Jonga, Isipaji seWallet, kunye novavanyo lweSicone Cover
Uvavanyo lweSamsung yeNqaku le8